देवघाट दर्शनकाे लाेभ देखाएर माहाधिवेशन उद्घाटनमा : RajdhaniDaily.com sharethis
सौराह (चितवन) । एमाले १०औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सहभागिता मात्रै होइन, कतिपय एमाले महाधिवेशन’bout‘अनभिज्ञ’ रहेको पाइएको छ ।
‘देवघाट दर्शनको लोभ देखाएर दिनभर महाधिवेशनमा प्रयोग गरिएको’ गुनासोसमेत आउन थालेका छन् । उनीहरूकै भनाइ आधार मान्ने हो भने निःशुल्क यात्रा र खानाको लोभमा देवघाट दर्शनका नाममा आफूहरूलाई चितवन ल्याइएका’ हुन् ।
‘हामी सित्तैमा देवघाट घुम्न पाउने आशाले आएका हौं,’ काभ्रेपलाञ्चोककी राधा दाहालले राजधानीलाई सुनाइन्, ‘त्यसैले परिवारसहित आइपुगेका छौं ।’
‘राजनीतिक रूपमा नेपाली कांग्रेससँग आस्था’ राख्ने सिन्धुलीका धु्रव घिमिरे ‘एमाले प्रतिनिधि’ हुने त प्रश्नै उठ्दैन । तर पनि उनी एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भए । परिवारसहित देवघाट दर्शन गर्न पाउने भएपछि एमालेले व्यवस्था गरेको गाडी चढेर देवघाट आइपुगेको घिमिरेले राजधानीसँग बताए ।
‘सित्तैमा देवघाट घुम्न पाउने भएपछि राजनीतिकभन्दा पनि धार्मिक आस्थाले आएका हौं,’ देवघाटको त्रिवेणी धाम स्नान गरिरहेका घिमिरे भन्छन्, ‘मजस्तै अरू पनि यसैगरी, आएका हुन् ।’
त्यस्तै, कास्कीका दुर्गाप्रसाद अधिकारीलाई पनि ‘देवघाट घुम्न जाने’ भनेर बोलाइएको हो । उनलाई स्थानीय एमाले कार्यकर्ताले ‘बिहीबार राति खाना खाएर हिँड्ने र बिहानै देवघाट त्रिवेणी धाममा स्नानपछि मन्दिर दर्शन गरेर फर्कने’ बताएर महाधिवेशनस्थल ल्याएका हुन् ।
‘एमालेको कार्यक्रममा जाने भनेर थाहै थिएन, घरबाट तीर्थ गर्न भनेर निस्केको हुँ, गाडीमा पुगेपछि महाधिवेशनको ब्यानर राखिएको देखें,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि मात्रै झुक्याएर बोलाएको थाहा पाएँ, देवघाट घुमाउने बताएपछि गाडी चढेर आएको हुँ ।’
महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा उपस्थित धादिङकी रामकला तामाङ त हराइन् नै । उनका पति हर्कबहादुर तामाङले उद्घाटनसत्र सकिएलगत्तै ‘श्रीमती हराएको’ भन्दै मञ्चबाटै ‘नोटिस’ भन्न लगाए । केही समय छटपटिएर मञ्चछेउमै बसे ।
आफूहरूलाई ‘देवघाट घुम्न भनी महाधिवेशनमा राखेको’ भन्दै हर्कबहादुरले आक्रोश पोखे । ‘हामी कुनै पनि पार्टीका होइनौंं, देवघाट घुम्न जाने भने, त्यसपछि छोराछोरी घरमै छाडेर दुवै जना आयौं,’ उनले भने, ‘श्रीमती हराउँदा गाडी पनि छुट्यो, अब कसरी घर जाने ?’ गाडीमा राखेर ल्याउने स्थानीय कार्यकर्ताले ‘ढिला भएको र अर्को गाडी चढेर आउनू’ भन्दै छाडेको दुःखेसो उनले पोखे ।
देवघाटमा शुक्रबार बिहान निकै घुइँचो लाग्यो । आन्तरिक पर्यटनका हिसाबले भन्ने हो भने एमाले महाधिवेशनले देवघाट भ्रमण गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ।
त्यसो त आफ्ना कार्यक्रममा जनतालाई झुक्याएर लैजाने एमाले मात्रै पहिलो पार्टी भने पक्कै होइन । यसअघि, अन्य राजनीतिक दलले समेत यस्तो ‘प्रवृत्ति’ देखाइसकेका छन् ।
काठमाडौंमा कार्यक्रम भए ‘पशुपतिनाथ भ्रमण दर्शन’ हवाला दिने गरिएको छ । लुम्बिनीमा कुनै राजनीतिक गतिविधि गर्नुपरे ‘लुम्बिनी भ्रमण’ भन्ने भ्रम छरिन्छ । जनकपुरमा भए ‘जानकी मन्दिर भ्रमण’ भनिन्छ ।
राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यक्रममा ‘जनसहभागिता’ देखाउन धार्मिक पर्यटकीयस्थल भ्रमणको ‘भ्रम’ छर्ने गरेका छन् । ‘टाउको’ देखाउने होडबाजी नै किन नहोस् ? तर, ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन’मा राजनीतिक दलका कार्यक्रम बढी प्रयोग हुने गरेका छन् । यो भने सकारात्मक पक्ष हो ।
‘निःशुल्क भ्रमणको आशा’मा जनता भ्रममा पर्छन् । नेता– कार्यकर्ताले पनि धार्मिकस्थलमा उनीहरूलाई घुमाउने व्यवस्था गर्नुलाई अर्को हिसाबले ‘सकारात्मक’ मान्नुपर्छ ।
म त राम्री छु किन पार्लर जानु भन्ने सोच्थेँ : करिश्मा मानन्धर
लमजुङको पकेट क्षेत्रमै मासियो सुन्तला
‘८३’मा कसरी छानिइन् दीपिका ?
महिलालाई आरक्षणभन्दा सक्षमताको खाँचो
एअरपोर्ट स्थापनाको ६६ वर्षपछि इन्धन डिपो निर्माणको काम सुरु